Izimpawu kusuka ku-A kuye ku-Z - Thola ku-inthanethi
Isigaba: Izimpawu kusuka ku-A kuye ku-Z
Thola ku-Inthanethi Disemba 13, 2019 Izimpawu kusuka ku-A kuye ku-Z Awekho amazwana
Ukukhathala kuvame ukuba yisimo esijwayelekile hhayi sokugula: ngemuva kwawo kungaba nemizamo engokomzimba noma yokomzwelo futhi, ngokweqiniso, ukulala okuncane kakhulu. Noma kunjalo, uma uzizwa ...
Ukuhluleka kwe-urinary (ukulahlekelwa ngumchamo ngokuzithandela) kuba khona lapho umchamo ongalawulwa uphunyuka esinyeni, okuvame ukucindezela kakhulu kulabo abathintekile. Ukulawulwa kwe ...
Ukuvuvukala kwesisu, igama elithi ukugcwala lichaza umuzwa ongathandeki wokugcwala kwesisu namathumbu. Ngokuyinhloko, umuzwa wokugcwala esiswini obangelwa umoya ogwinyiwe, ...
Izinsini zokuopha ziyimisuka yegazi ngokuluma amagwebu we-apula kanye nozinyo obomvu ngemuva kokuxubha. Izinsini zivame ukuvuvukala ngasikhathi sinye, ...
Owesifazane ophansi besisu esibuhlungu
Ubuhlungu besisu ngaphansi kowesifazane; zingavela emathunjini noma emgudwini wokuchama (ngokwesibonelo, isimila), kepha futhi nasezitho zangasese zowesifazane zangaphakathi (ngokwesibonelo, ama-ovari, amashubhu ...
Ukudideka kwengqondo noma i-delirium
Ukudideka kwengqondo ukuphazamiseka kwengqondo okuvame ukwenzeka kubantu asebekhulile. Ukudideka kwengqondo kuphawulwa ngokudidisa ingqondo, ukungabi nampilo yangaphakathi nememori elinganiselwe. Umbono ...
Umlomo owomile (i-xerostomia) ukomiswa okuqondile kwe-mucosa yomlomo. Kubangelwa ukukhiqizwa okuncishisiwe kwamathe (ngaphansi kuka-0.1 ml / min). Abantu abaningi bahlushwa i ...
I-Tremor (ukunyakaza ngokuzithandela)
Thola ku-Inthanethi Disemba 12, 2019 Izimpawu kusuka ku-A kuye ku-Z Awekho amazwana
I-Tremor, ibizwa ngokuthi ukunyakaza kokuzenzela okungatheni noma okunethonya kwesitho esisodwa somzimba noma ngaphezulu. Lokhu ukunyakaza kuvela lapho izinkontileka eziphikisayo zemisipha (izitha zabaphikisi) (inkontileka) ziphindaphindwa. ...
Ubuhlungu besisu ngaphansi kwendoda
Ubuhlungu besisu ngaphansi komuntu; Kwesinye isikhathi avela emathunjini, emgodini wokuchama (ngokwesibonelo, kwesinye) noma esifubeni. Ngakho-ke, ubuhlungu besisu bungabakhona ngokuhlukile ...
Ukudumazeka: Amagama ukudabuka nokudana kuchaza isimo esingesihle nesicindezelekile: cishe bonke abantu bayawazi lo muzwa. Labo abadabuke kakhulu futhi bacindezelekile, ngokuvamile ...